ထည့်သွင်းပြီးနောက် MX-Linux 19.0 နှင့် DEBIAN 10.2 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါ Linux မှ
ထည့်သွင်းပြီးနောက် MX-Linux 19.0 နှင့် DEBIAN 10.2 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါ
ဤစာစောင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ်းလှမ်းရန်ဆက်လက်လျှောက်ထားမည် ဘုံလုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတွက် အဆင့်မြှင့်တင်နှင့်ပိုကောင်းအောင်နှစ် ဦး စလုံးရန် MX-Linux ကို ၁၉.၁ como ဒေဗန် ၁၀ ထည့်သွင်းပြီးနောက်ယခင်အဆုံးစွန်အပေါ်တည်ဆောက်အဖြစ်။
ဒါကိုလုပ်ဖို့ သင်ခန်းစာ ငါတို့က ISO ဖိုင် နောက်ဆုံး၏ MX-Linux လျှပ်တစ်ပြက်ဒီဇင်ဘာလ 64 ရက်စွဲပါ 2019-bit, ခေါ် MX-19_December_x64.iso, ဒါပေမယ့်မည်သူမဆိုနောက်ဆုံးရရှိနိုင်ပါကနေရယူနိုင်ပါတယ် ဒီမှာနှင့် ISO ဖိုင် နောက်ဆုံး၏ DEBIAN ၏တည်ငြိမ်သောဗားရှင်း၂၀၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ DVD အတွက် 64-bit, ကိုခေါ်သည် debian-10.2.0-amd64-DVD-1.iso ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်မည်သူမဆိုနောက်ဆုံးရရှိနိုင်ပါကနေရယူနိုင်ပါတယ် ဒီမှာ.
ဒါငါတို့အတွက်ပဲ DEBIAN 10 - Buster တွင်ပထမဆုံး post-install သင်ခန်းစာနောက်ဆုံးဖန်တီးလိုက်တဲ့ဟာအရင်ဗားရှင်းမှာကတည်းက DEBIAN9- ဆန့်။ ၎င်းတို့ကိုစနစ်တကျညှိနှိုင်းလိုပါကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
1 DEBIAN နှင့် MX-Linux အကြောင်းယခင်ဆောင်းပါးများ
2 DEBIAN 10 နှင့် MX-Linux 19 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်၊ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်နှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် Post-Installation အဆင့်များနှင့်အကြံပြုချက်များ
2.1 update ကို
2.1.1 MX-Linux ကိုမွမ်းမံရန်သာ
2.1.2 DEBIAN / MX-Linux ကို update လုပ်ရန်
2.1.3 optional လုပ်ရပ်များ
DEBIAN နှင့် MX-Linux အကြောင်းယခင်ဆောင်းပါးများ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GNU / Linux Operating Systems ကိုဘယ်လိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်မလဲ။ (entry ကိုကြည့်ပါ)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GNU / Linux Operating Systems ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။ (entry ကိုကြည့်ပါ)
သင်၏ GNU / Linux ကို Software Development အတွက်သင့်တော်သော Distro တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းပါ (entry ကိုကြည့်ပါ)
သင်၏ GNU / Linux ကိုအရည်အသွေးမြင့်မားသော Multimedia Distro အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပါ (entry ကိုကြည့်ပါ)
သင်၏ GNU / Linux ကို Distro Gamer အဖြစ်ပြောင်းလဲပါ (entry ကိုကြည့်ပါ)
သင်၏ GNU / Linux ကို Digital Mining အတွက်သင့်လျော်သော Operating System တစ်ခုသို့ပြောင်းပါ (entry ကိုကြည့်ပါ)
နှင့်အမှု၌, သင်အပေါ်ယခင်ဆောင်းပါးများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ချင်တယ် MX-Linuxအောက်ပါတို့ကိုရရှိနိုင်သည်။
MX-Linux 17.1: ခေတ်မီ။ အလင်း၊ အစွမ်းထက်။ ဖော်ရွေသော Distro (entry ကိုကြည့်ပါ)
MX-Linux 19 - Beta 1: Distrowatch Distro # 1 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားသည် (entry ကိုကြည့်ပါ)
MX Linux 19: DEBIAN 10 ကိုအခြေခံထားတဲ့ဗားရှင်းသစ်ကိုဖြန့်ချိလိုက်တယ် (entry ကိုကြည့်ပါ)
ဤဆောင်းပါးများနှင့်ပတ်သက်။ အခြားသူများ ဒေဘီယန် y MX-Linux, သူတို့ကသူတို့ဘယ်လိုဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကိုဘယ်လို install လုပ်ဖို့အကြောင်းပြောဆိုသော? ငါတို့ဒီမှာတိုက်ရိုက်မှတိုက်ရိုက်သွားလိမ့်မည် တပ်ဆင်ပြီးနောက်အဆင့်များ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ရရှိနိုင်သောမူကွဲအသစ်များ၏။
DEBIAN 10 နှင့် MX-Linux 19 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်၊ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်နှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် Post-Installation အဆင့်များနှင့်အကြံပြုချက်များ
ဤနေရာတွင် run ရန်နှင့် install လုပ်ရန်ဤနေရာတွင်အကြံပြုထားသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် package များသာဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ "packages များ အကြံပြုခဲ့သည်" တစ်ခုချင်းစီသည် ၄ ​​င်းတို့အားလုံးသို့မဟုတ်အချို့အားလုံးကို install လုပ်ရန်ကျန်ရှိနေသည်။ ၎င်းတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည် ရေတိုသို့မဟုတ်အလယ်အလတ်ကာလအတွက်၎င်းတို့ကိုသိရှိပြီးအသုံးပြုရန်လိုအပ်သောသို့မဟုတ်အသုံးဝင်သော, သူတို့ကိုပြီးသား run သို့မဟုတ် installed ရှိခြင်းအားဖြင့်။
ထိုလုပ်ရပ်များနှင့် / သို့မဟုတ် packages များဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ ယခင်က Distros နှစ်ခုလုံးအပေါ်စမ်းသပ်ပြီးနှင့်၎င်းတွင်ပုံမှန်ထည့်သွင်းထားသော package များကို uninstall လုပ်ရန်မတောင်းဆိုပါနှင့်။ ထို့အပြင် သူတို့ကမှတ်ဉာဏ်သို့မဟုတ် CPU ကို၏စားသုံးမှုတိုးမြှင့်ကြပါဘူးအကြောင်းမှာသူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့် memory အတွင်းလုပ်ငန်းစဉ်များသို့မဟုတ် daemons (၀ န်ဆောင်မှုများ) ကိုမတင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထုပ်တစ်ခုစီအတွက်မည်သည့်အတွက်အသုံးပြုသည်ကိုကြိုတင်သိလိုလျှင်နှိပ်ပါ ဒီမှာ.
A.- ပြေးပါ MX-Updater ပါ မီနူးဘားမှာဒါမှမဟုတ် start menu ကနေ
B.- ကနေပြေးပါ terminal ကိုစတင် "root session"အောက်ပါ Command ဖြင့်အောက်ပါ pack များကိုထည့်သွင်းပါ။
DEBIAN / MX-Linux ကို update လုပ်ရန်
ကနေပြေးပါ terminal ကိုစတင် "root session"(Root @ mycomputer $)အောက်ပါ Command ဖြင့်အောက်ပါ pack များကိုထည့်သွင်းပါ။
၁။ ဖန်တီးထားသောအသုံးပြုသူအား root user ထံမှ sudoers အသုံးပြုသူအဖြစ်ပြောင်းပါ
adduser myuser root nano / etc / sudoers myuser ALL = (အားလုံး: အားလုံး) အားလုံး
မှတ်စု: ဖော်ပြထားသောလိုင်းအောက်ရှိနောက်ဆုံးစာကြောင်းကိုထည့်ပါ root ALL=(ALL:ALL) ALL
၂။ superuser .bashrc ဖိုင်ရှိ $ PATH variable ကို DEBIAN2အတွက်သာအပ်ပါ
မှတ်စု: ၏ဗားရှင်းအတွက်သတိရပါ "ဒေဗန် ၁၀" မစတင်လျှင် "root session" "su root" အစား "su root" command ကို အသုံးပြု၍ variable ၏ content ကိုအသစ်ပြောင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည် "$ PATH" command ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကဲ့သို့သော command ကိုကွပ်မျက်ပြproblemsနာများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ "Dpkg"။ ထို့ကြောင့်၊ ဤပြproblemနာကိုယာယီဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည် "လမ်း" command ကိုနှင့်အတူလိုအပ်ခဲ့ပါတယ် «တင်ပို့» အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
သင်ထာဝရဖြေရှင်းလိုလျှင်ထည့်သွင်းရမည် "လမ်း" အောက်ပါအတိုင်းလိုအပ်သည် -
mode ကို 1: ပဲ့တင်သံ command ကိုအတူ
mode ကို 2: nano command ကိုအတူ
Recordatorio: သင် command ကိုနှင့်အတူ log in လျှင် "သူ့ -" သင်သည်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအမြဲကျော်သွားနိုင်သည်။
စိတ်ကြိုက်အကြောင်းအရာဖိုလ်ဒါ (သို့) နိုင်ငံခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များကို« / opt / »တွင်ဖန်တီးခြင်း
mkdir -p / opt / my folder chmod 777 -R / opt / my folder က myuser ကိုပြတယ်။ -R / opt / myfolder
Panel ကို configuration ကို options များနှင့်၎င်း၏ဒြပ်စင်၏စိတ်ကြိုက်
ဒီသင်ခန်းစာရည်ညွှန်းသောအမှုများတွင်, DEBIAN နှင့် MX-Linux distros များ နှင့် XFCE Desktop Environments နှင့် ဝီစကီမီနူးအောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည် -
ဝီစကီ Menu: အရွယ်အစား၊ မီနူးအိုင်ကွန်၊ အကြိုက်ဆုံးအပလီကေးရှင်းများစာရင်းနှင့်အခြား tabs များကိုရွေးချယ်ပါ "အသွင်အပြင်နှင့်အပြုအမူ" ၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများအတွက်ဆန္ဒရှိနေကြသည်။
ဒါ့အပြင် app ကိုအတူ ပင်မမီနူး (Alacarte) ဖြစ်နိုင်သည် ပိတ်ပါ အတွက်မြင်နိုင်ခြင်းနှင့်တပ်မက်လိုချင်သောအပလီကေးရှင်း Menu ကိုစတင်ပါ.
Desktop Settings ကိုစိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ပါ
ခေါ်အပိုင်း (လျှောက်လွှာ) ၌တည်၏ XFCE Desktop အောက်ပါလုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲများကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်:
နောက်ခံ - နောက်ခံတစ်ခုသို့မဟုတ်အများအပြားကိုရွေးပါ။ အတူတူသို့မဟုတ်အားလုံး၏တင်ဆက်မှုကိုရွေးချယ်ပါ။
မီနူး: Desktop Menu နှင့် Window List Menu အမျိုးအစားများမှလိုချင်သောသို့မဟုတ်လိုအပ်သောရွေးစရာများကိုရွေးချယ်ပါ။
၏ဖြစ်ရပ်အတွက် MX-Linux နောက်ခံပုံကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်သင်ပြုပြင်နိုင်သည် GRUB ဆောင်ပုဒ် "ပိတ်ချော" အရာကပုံမှန်အားဖြင့်လာပါတယ်။
၏ဖြစ်ရပ်အတွက် ဒေဘီယန် နောက်ခံပုံကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်သင်ပြုပြင်နိုင်သည် GRUB ဆောင်ပုဒ် "Sသိုက်" အရာကပုံမှန်အားဖြင့်လာပါတယ်။
မှတ်စု: ဒီပြောင်းလဲမှုကိုအသုံးပြု။ လက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် configuration ဖိုင်များကိုတည်းဖြတ်ခြင်း ၏ GRUB ခေါင်းစဉ်များ အသုံးပြုခဲ့ပေမယ့် application ကို install လုပ်ဖို့ပိုကောင်းတယ် "GRUB စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်" နှင့်ဤပြောင်းလဲမှုလုပ်, နှင့်လည်း၏သွင်းအားစုများ၏လိုင်းများစိတ်ကြိုက်၏အားသာချက်ယူပါ ဟာ GRUB.
En MX-Linux application ကို install လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုပြောသည် (Conky မန်နေဂျာ), ဒါပေမယ့်၌တည်၏ ဒေဘီယန် ၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်လုပ်ရန်၊ အဆိုပါ Conky စိတ်ကြိုက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှု၏။
၏စိတ်ကြိုက်လွယ်ကူချောမွေ့ .bashrc ဖိုင်များ root နှင့်အသုံးပြုသူ။
kernel compilation (သို့) အခြား application များကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်အထောက်အပံ့ပေးပါ။
အဆင့်မြင့်သောအသုံးပြုသူများအတွက်အရေးကြီးသော application များ (multimedia, gamers, developer များအစရှိသဖြင့်) ကိုထောက်ပံ့ပါ။
Operating System ရှိ compression / decompression လုပ်ဆောင်မှုများကိုအပြည့်အဝထောက်ခံပါ။
Terminal Interface (CLI) နှင့်သက်ဆိုင်သော plugins များနှင့်အခြေခံ application များ (မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော / သို့မဟုတ်အသုံးဝင်သော) install လုပ်ပါ။
Graphical Interface (GUI) နှင့်သက်ဆိုင်သည့် add-ons နှင့်အခြေခံ application များ (မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော / သို့မဟုတ်အသုံးဝင်သော) install လုပ်ပါ။
သာမန်အသုံးပြုသူများ (ရုံးအလိုအလျောက်) အတွက်အခြေခံအပန်းဖြေခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေး (ဂိမ်းများ) လျှောက်လွှာအထုပ်များ (မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနှင့် / သို့မဟုတ်အသုံးဝင်သော) ကိုထည့်သွင်းပါ။
ငါ့အမှု၌, ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်ကို run ငါ၏အ MX-Linux ကို Distro 19 ငါ့အထုတ်လုပ်ရန် အသစ် portable နှင့် installable က ISO တစ်ဦးနှင့်အတူ အစွန်းရောက်စိတ်ကြိုက်နှင့် optimizationငါများသောအားဖြင့်ငါခေါ်သောအရာကို "အံ့ဖွယ်အမှုများ"ယခုသင်၏၌တည်၏ 2.0 ဗားရှင်း။ ရလဒ်ကိုသင်မြင်နိုင်ရန်ပူးတွဲပါဖန်သားပြင်များ:
ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ဒီအပိုင်းကအခုထိ။ ဒုတိယအပိုင်းအနေဖြင့် Distros များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင် (ဖြည့်စွက်) ရန်အခြား package များ (applications များ) ကိုအကြံပြုကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မှတ်ချက်ပေးလိမ့်မည် DEBIAN 10 နှင့် MX-Linux 19.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် ဤ "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «DEBIAN y MX-Linux»၂၀၂၀ အတွက်၎င်း၏လတ်တလောနှင့်လက်ရှိဗားရှင်းများတွင်အောင်မြင်ရန် «actualizarlas y optimizarlas»တစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်များအတွက်အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ applications များနှင့်ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့မှကြီးသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » ထည့်သွင်းပြီးနောက် MX-Linux 19.0 နှင့် DEBIAN 10.2 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါ
တရားဝင် MX စာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်သိသမျှ MX-19_December_x64.iso မရှိပါ။ ဆောင်းပါး၌သူတို့ထားခဲ့သည့် link ကိုနှိပ်လိုက်လျှင်0bit ISO ကို download လုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ထောက်ခံချက် - တရားဝင် ISO ကို MX site မှကူးယူပါ။ ထို့နောက်လူတိုင်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျပြင်ဆင်ပါ။
မင်္ဂလာပါ Gerson ။ Telegram မှာမင်းပေးခဲ့တဲ့အဖြေကိုဒီမှာငါကော်ပီကူးမယ်။
ငါပျက်စီးသွားသော link ကို fixed! ဆောင်းပါးရေးသားစဉ်က ISO MX-19_December_x64.iso ၏ပြည့်စုံသော ISO ရှိခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်သည် download လုပ်ထားသော ISO နှင့်အတူဖန်သားပြင်ကိုပြသခဲ့သည်ဖြစ်သော်လည်းဒီဇင်ဘာလမှဓာတ်ပုံအားလုံးသည်သုည (၀) kb ဖြစ်သည်။
ငါဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက်တာကပြီးပြည့်စုံတယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်စုံတစ်ယောက်က0Kb ကို repo ထည့်လိုက်တယ်၊ ဒါတွေအားလုံးဒီလိုမျိုးထပ်တူပြုတယ်။ ငါဆိုလိုတာကအမှားကငါ့အတွက်မဟုတ်ဘူး။ ငါ repos ကိုင်တွယ်ကြဘူးကတည်းကငါပြီးပြည့်စုံသော download လုပ်ပါ။ ထိုအခါမည်သည့် MX-Linux မှန်ကိုရွေးချယ်ပါစေဒီဇင်ဘာလရိုက်ချက်သည်သုညဖြစ်သော်လည်းတည်ဆောက်မည့်ငွေပမာဏမှာရှိသည်။
သို့သော်လည်းငါသည် link ကိုပြင်ပေး, ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောတန်ဖိုးရှိသောမှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ရည်ရွယ်ချက်မှာ; သင်တည်ငြိမ်သော repository မှ liquorix kernel ကို install လုပ်နိုင်သလား။
Gerson! မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းအရာတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုပြုလုပ်ပါမည်။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Osvaldo Santos ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါပထမ ဦး စွာအပေါင်းတို့၏, post ကိုများအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ကစတင်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောအကူအညီပေမယ်ငါပညတ်တော်များ၏တစ် ဦး ချင်းစီအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုသိလိုပေမယ့်အခြားသူများကိုမသိရပါဘူး, ငါအများပြည်သူ၏ကျန်ကောင်းသော၏ကောင်းစွာလုပ်ပေးမယ်လို့ထင်သူတို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏။ နောက်တဖန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Osvaldo santos အားပြန်ပြောပါ
ISO အသစ်ကို ထပ်မံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဖန်တီးရန် Liquorix Kernel Stable kernel ကိုသင်၏ iso သို့ထည့်ရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ သင်၏ version v2.0 အတွက် download link ကိုကျွန်ုပ်ရှာမတွေ့ပါ
JonathanMG ကိုကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် 2.0 ကိုမတင်ပို့ရသေးပါ၊ သို့သော်၎င်းကို Liquorix Kernel ကိုကြိုးစားကြည့်ပြီး၎င်းတွင်ပြproblemsနာများမတွေ့ရပါ။ ၎င်းသည်ပေါင်းစည်း။ မရပါ၊ သို့သော်ပြproblemနာမရှိဘဲသင်လက်ခံနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်ပြောပါလိမ့်မည်။
ok ဗားရှင်း ၂.၀ ကို download လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်မရှာနိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်၎င်းကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ရရှိနိုင်သနည်း။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်ရန်သွားသည့်အခါ၎င်းစနစ်သည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပြီးတည်ငြိမ်သောဗားရှင်းသို့မဟုတ်မတည်ငြိမ်သောဗားရှင်းဖြစ်သည့်စနစ်အတွင်းသင့်ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုခြင်းသည်အလွန်လက်တွေ့ကျလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သင့်အားမျှော်လင့်ပါသည်။
DEBIAN 10: တပ်ဆင်ပြီးနောက်အပိုထပ်ဆောင်းအစီအစဉ်များသည်ဘာလဲ။
KDE Applications အတွက် ၁၉၁.၁.၁ အသစ် update ကိုစာရင်းပြုပါ